Ndoita Sei Kana Ndichishungurudzwa Nevamwe Paindaneti? | Vechidiki Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Estonian Faroese Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Moore Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Oromo Pangasinan Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian Samoan Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tiv Turkish Ukrainian Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Ndoita Sei Kana Ndichishungurudzwa Nevamwe Paindaneti?
Indaneti inoita kuti zvive nyore kushungurudza vamwe. Inoita kuti “kunyange vana vanenge vari vanhu kwavo varwadzise vamwe nekuti munhu anogona kutumira zvinhu asi asingazviratidze kuti ndiani,” rinodaro bhuku rinonzi CyberSafe.
Pane vanhu vane mukana wakakura wekudheererwa. Vanhu ava vanosanganisira vaya vanonyara kana kuti vakanyararisa, vanozvitarisira pasi kana kuti vanoonekwa sevakasiyana neruzhinji.
Kushungurudzwa nevamwe paindaneti kunokonzera matambudziko. Kunogona kuita kuti munhu anzwe kusurukirwa, ave nechirwere chedepression, uye vamwe vakatosvika pakuzviuraya.
Chekutanga zvibvunze kuti, ‘Uku kushungurudzwa here?’ Dzimwe nguva vanhu vanogona kutaura zvinorwadza asi vasina chinangwa chekuda kutirwadzisa. Kana zvinhu zvakadai zvikaitika, tinogona kushandisa zvinotaurwa neBhaibheri parinoti:
“Usakurumidza kugumbuka, nokuti kugumbuka kunogara pachipfuva chemapenzi.”​—Muparidzi 7:9.
Asi kana munhu achitambudza, achishora kana kuti kutyisidzira mumwe munhu paindaneti nemaune, anenge achitomushungurudza.
Kana paine ari kukushungurudza paindaneti yeuka izvi: Zvauchaita zvichaita kuti zvinhu zviite nani kana kuti zvitowedzera kuipa. Edza kushandisa mazano anotevera.
Usapindura munhu anokushungurudza. Bhaibheri rinoti: “Munhu anorega kutaura mashoko ake ane zivo, uye munhu ane ungwaru akadzikama.”​—Zvirevo 17:27.
Zano iri rinoshanda nekuti: “Kazhinji kacho, vanhu vanoshungurudza vamwe vanenge vachida kuti vatsamwe. Kana munhu atsamwa, wacho anenge achimushungurudza anobva atoita manyawi,” akadaro Nancy Willard mubhuku rake rinonzi Cyberbullying and Cyberthreats.
Chinhu chinokosha chaunofanira kuziva ndechekuti: Dzimwe nguva kunyarara ndokuzvipedza.
Usadzorera. Bhaibheri rinoti: ‘Usatsiva zvinokuvadza nezvinokuvadza kana kutuka nokutuka.’​—1 Petro 3:9.
Zano iri rinoshanda nekuti: “Kutsamwa kunoratidza kuti hauna kusimba uye izvi zvinoita kuti uwedzere kushungurudzwa,” rinodaro bhuku rinonzi Cyber-Safe Kids, Cyber-Savvy Teens. Kana ukadzorera unenge wava kutofanana nemunhu anenge achikushungurudza.
Chinhu chinokosha chaunofanira kuziva ndechekuti: Kana ukadzorera zvakangofanana nekudira parafini pamoto.
Ita chimwe chinhu. Bhaibheri rinoti: “Usazvirega uchikundwa nezvakaipa.” (VaRoma 12:21) Pane zvaunogona kuita kuti usaramba uchishungurudzwa, asi usingaiti kuti nyaya yacho iwedzere kuipa.
Ita kuti mameseji emunhu iyeye asapinda mufoni mako. “Haungamboshungurudzwi nezvinhu zvaunenge usina kuverenga,” rinodaro bhuku rinonzi Mean Behind the Screen.
Sevha zvaunenge watumirwa kuti uzozvishandisa seumboo, kunyange kana usina kuzviverenga. Izvi zvinosanganisira mameseji aunotumirwa nemunhu achikutuka, mae-mail, mameseji anotumirwa pamasocial network, mameseji akaita zvekurekodhwa, kana kuti chero imwe nzira yekukurukura nayo.
Udza munhu wacho kuti asiyane newe. Mutumire meseji uchinyatsoratidza kuti zvaanoita hauzvidi asi usingaratidzi kuti wakatsamwa. Unogona kunyora kuti:
“Usaramba uchinditumira mameseji.”
“Bvisa zvawakaisa paindaneti.”
“Kana zvikaramba zvichienderera mberi, ndichatora matanho ekuti zvipere.”
Usazvitarisira pasi. Isa pfungwa dzako pane zvaunokwanisa kwete pane zvausingakwanisi. (2 Vakorinde 11:6) Sezvinongoita munhu anofarira zvekurova vamwe, vanhu vanoshungurudza vamwe paindaneti vanowanzonanga vavanodheerera.
Udza munhu mukuru. Tanga nekuudza vabereki vako. Unogona kumhan’ara nyaya yacho kuvaridzi vewebsite inenge ichishandiswa nemunhu anenge achikushungurudza. Kana nyaya yacho itori hombe, iwe nevabereki vako munogona kumhan’ara nyaya yacho kuchikoro kwaunodzidza, kumapurisa, kana kukumbira kubatsirwa nevanhu vemutemo.
Chinhu chinokosha chaunofanira kuziva ndechekuti: Pane matanho aunogona kutora kuti usashungurudzwa, uye kana ukaramba uchishungurudzwa une zvaunogona kuita kuti zvisanyanya kukukanganisa.
“Kana uri kushungurudzwa pane imwe website, pane here chikonzero chekuti urambe uchishandisa website iyoyo? Pane zvairi kukubatsira here kana kuti iri kutokukanganisa? Unogona kublocker munhu wacho here? Une zvaunogona kuita kuti ubude mudambudziko racho.”—Natalie.
“Kana paine ari kukushungurudza paindaneti, udza munhu mukuru. Usatyira kuti unozoudzwa kuti ‘unongotsamwiswa nezvinhu zvese zvese’ kana kuti ‘uri mwana.’ Handizvo zvauri. Kuudza mumwe munhu kunotoratidza kuti une ushingi.”—Darius.
Zvaungaita Kuti Usashungurudzwa Paindaneti
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndoita Sei Kana Ndichishungurudzwa Nevamwe Paindaneti?
ijwyp nyaya 73
Vechidiki Vakabatsirwa Kuziva Zvokuita Pavanodhererwa Kuchikoro